"ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်ရှင်ကို ဘယ်တော့မှမပြောသင့်တဲ့ စကားများ" - Myanmar Network
"ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်ရှင်ကို ဘယ်တော့မှမပြောသင့်တဲ့ စကားများ"
Posted by Kyawt K Khine on June 30, 2015 at 11:23 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
“ရိုးသားမှုက အကောင်းဆုံး မူဝါဒ ဖြစ်တယ်” အဲဒီဆိုရိုးစကားရှိနေပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ့်စိတ်ထဲရှိတဲ့စကား တွေ၊ အယူအဆတွေ၊ အတွေးအမြင်တွေ ကို အမှန်အတိုင်း ထုတ်မပြောသင့်တဲ့ အချိန်အခါလည်း ရှိပါတယ်။ အမှန် အတိုင်းပြောလို့ ရွာပြင်ထွက်နေရတယ်ဆို တဲ့ စကားလည်း အရှိသားမဟုတ်လား။ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အထူး သဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခါတစ် ရံမှာ အရှိအတိုင်း မပြောသင့်တဲ့ စကား လုံး တချို့ရှိပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်ရှင်ကို ဘယ်တော့မှ မပြော သင့်တဲ့ စကားတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေး ချင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးဖတ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်အသီးသီးမှာ လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ ဆင်ခြင်သတိပြုစရာ အချက်ကလေးတစ်ခု ရသွားစေလိုတဲ့ ရည် ရွယ်ချက်နဲ့ရေးသားတင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါ တယ်။
အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုပဲဖြစ်ဖြစ် မေး မြန်းတဲ့အခါ မသိဘူးလို့ အလွယ်တကူ ဖြေ လေ့ရှိကြပါတယ်။ မေးခွန်းတိုင်းအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ အဖြေက ]မသိဘူး}ဖြစ်လာတဲ့ အခါ အလုပ်ရှင်က ကိုယ့်အပေါ် စိတ်ပျက် စေပါတယ်။ ကိစ္စရပ်တိုင်းမှာ ကိုယ်မသိဘူး ဆိုရင်တောင် ]ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် ကြိုး စားပြီး ရှာကြည့်လိုက်ပါ့မယ်၊ ကြိုးစားပြီး စုံစမ်း လိုက်ပါ့မယ်}ဆိုတဲ့ အဖြေမျိုးကိုပဲ အလုပ်ရှင်တွေက လိုချင်ကြတာပါ။ အဲဒီ အဖြေမျိုးရတာကိုပဲ ကျေနပ်ကြတာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ အလွယ်တကူ ]မသိဘူး} ဆိုတဲ့ အဖြေကြောင့် အလုပ်ရှင်ရဲ့ အားကိုးအား ထားပြုရတဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်မဖြစ်နိုင် တော့ပါဘူး။ ဒီစကားလုံးကို မပြောမိစေဖို့ ဆင်ခြင်စေ လိုပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် က တာဝန်တစ်ခုပေးအပ်တဲ့အခါ ကြိုးစား မကြည့်ရသေးခင်မှာ ကျွန်တော်၊ ကျွန်မ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ စကားကို ဘယ်တော့ မှ မပြောသင့်ပါဘူး။ ဒီစကားက ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်ရှင်က ကိုယ့်ကို စိတ်ပျက်သွား စေပါတယ်။ အဲဒီစကားကို ပြောလိုက်တာ က ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုအားနည်းပြီး၊ အခွင့် အရေး အခွင့်အလမ်းကို လိုလိုလားလား မရှိဘူးလို့ အလုပ်ရှင်က ထင်မြင်ယူဆသွား စေပါတယ်။ အလုပ်ရှင်က ကိုယ့်ကို တာဝန်တစ်ခုခုပေးအပ်တဲ့အခါ အဲဒီစကား လုံးကို မပြောမိစေဖို့ သတိပြုစေလိုပါ တယ်။
အလုပ်ရှင်က ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်တာဝန် မဟုတ်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုခုကို လုပ်ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းတဲ့အခါမှာ ဒီအပိုင်းက ကျွန်တော့်အလုပ်မဟုတ်ဘူး၊ ဒီအလုပ်က ကျွန်မရဲ့ အလုပ်တာဝန်နဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူး စသဖြင့် ငြင်းဆိုတတ်တာမျိုးကိုလည်း ရှောင်သင့်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်ရှင်က ကိုယ်လုပ်နိုင်မယ်ထင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုခုကို လုပ်ပေးဖို့ အကူအညီ တောင်းတဲ့အခါ ခေါင်းရှောင်လိုက်တာမျိုး က သူ့ရဲ့ အားကိုးရတဲ့၊ ယုံကြည်ရတဲ့ ဝန် ထမ်းစာရင်းထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့နာမည်မရှိနိုင် တော့ပါဘူး။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဒီလိုစကားလုံး မျိုးကိုလည်း မပြောမိဖို့ သတိထားရပါ မယ်။
ဒီစကားတစ်ခွန်းကလည်း အလုပ်ခွင် မှာ မပြောသင့်တဲ့ စကားအဖြစ်ပါဝင်နေပါ တယ်။ ဘယ်သူကမှ ကိုယ့်ရဲ့ အဆိုးမြင်တဲ့ အမြင်တွေ၊ အယူအဆတွေကို မကြားချင် ပါဘူး။ အဲဒီအထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်ရှင် လည်း ပါဝင်တယ်ဆိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။ အလုပ်ခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အယူအဆတွေ၊ အတွေးအမြင်တွေ၊ မူဝါဒတွေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေ ပြောဆိုကြတဲ့အခါ အဲဒါ ကတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အဆိုးမြင်တဲ့ အယူအဆမျိုးနဲ့ မပြောမိစေဖို့ ရှောင်ကျဉ် ရပါမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ မှတ်ချက်၊ မေးခွန်းတွေ က အဆိုးမြင်တဲ့ဘက်ကို ဦးတည်မသွားစေ ဖို့ အထူးဂရုစိုက်ရပါမယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့် ရဲ့ စကားလုံးရွေးချယ်မှုကို အထူးသတိ ထားရပါမယ်။ အလုပ်မှာ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမှာ အဲဒါက မဖြစ်နိုင် ဘူးလို့ ပြောဆိုမယ့်အစား ကိုယ့်ရဲ့အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရပါမယ်။
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ကိုယ်နဲ့အဆင်မ ပြေဖြစ်နေတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အလုပ်အတူတွဲမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ စကား က ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ကို ဘယ်တော့မှ မပြောသင့်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းပါ။ ဘယ်နေ ရာမှာမဆို တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း အလုပ်လုပ်လို့ မရပါဘူး။ တစ်ဦးတစ် ယောက်တည်း တော်နေ၊ ကောင်းနေလို့ လည်း လုပ်ငန်းတစ်ခုက မအောင်မြင်နိုင် ပါဘူး။ ဒီတော့ စုပေါင်းအင်အားနဲ့ ညီညီ ညွတ်ညွတ်လုပ်ကိုင်မှသာ အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မှာပါ။
လုပ်ငန်းခွင်မှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အချင်းချင်း အဆင်မပြေဖြစ်တာက လုပ် ငန်းရှင်တွေ မကြိုက်ဆုံးအချက်တစ်ခုပါပဲ။ တချို့အလုပ်ရှင်တွေကတော့ အလုပ်ခေါ် ကတည်းက အရည်အချင်းလိုအပ်ချက်မှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်သူဖြစ်ရမယ်ဆို တာကို လိုအပ်ချက်အနေနဲ့ ဖော်ပြလာကြ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ လုပ် ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်း၊ ဌာနတစ်ခုနဲ့ တစ်ခု မညီညွတ်တာကို အလုပ်ရှင်တွေ အနေနဲ့ အပြင်းထန်ဆုံး ကန့်ကွက်ထားပါ တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်ရှင်ကိုလည်း လုပ် ငန်းခွင်ထဲမှာ ဟိုလူနဲ့ တွဲမလုပ်နိုင်ဘူး၊ ဒီလူ နဲ့ တွဲလုပ်ဖို့ အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့တော့ သွားမပြောမိစေနဲ့။ သူတို့အနေနဲ့ ကိုယ့်ကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိသူလို့ ထင် သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီအလုပ်ကို လုပ်လိုက်ရတဲ့အတွက် ဘာ အကျိုးအမြတ်ရမလဲ
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာ တခြားသူကို ကူညီတာ၊ ဒါမှမဟုတ် တခြား ဌာနတစ်ခုခုကို ကူညီပေးရတာလည်း ရှိ တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအခါမျိုးမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်ရှင်ကို ဒီလိုကူညီပေးလိုက်ရတဲ့အ တွက် ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လိုအကျိုးကျေး ဇူး ပြန်ရမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုး မမေးသင့် ပါဘူး။ ဒီမေးခွန်းက ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်ရှင်ကို ဘယ်တော့မှ မပြောသင့်တဲ့ စကားတစ်ခွန်း ထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ အလုပ်ခွင်အတွင်း မှာ တစ်ဦးအခက်အခဲကို ဝင်ရောက်ကူညီ တာမျိုးကလည်း စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် မဟုတ်တဲ့ လူ့ကျင့်ဝတ်တစ်မျိုးဖြစ်နေပါ တယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ခုပေးဆပ်ရင် တစ်ခု ပြန်ရရမယ်ဆိုတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို မျှော် ကိုးတဲ့ စိတ်မျိုး မထားသင့်ပါဘူး။ ဒီအချက် ကို သတိပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင် မှာ တစ်ဦးအခက်အခဲကိုတစ်ဦး အပြန် အလှန်ကူညီရင်း အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ဖို့ အခုကစပြီး ဒီစကား လုံးတွေကို ရှောင်ကျဉ်ကြစေဖို့ ဖော်ပြပေး လိုက်ရပါတယ်။
Permalink Reply by sweswewin on July 3, 2015 at 11:40
Permalink Reply by yarzarkoko on July 4, 2015 at 9:34
အင်း.... တကယ်မှန်တဲ့ စကားပဲဗျို့.... တခါတလေ ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင်တောင် အမှတ်တမဲ့ ပြောမိခဲ့တဲ့ စကားလေးတွေဖြစ်နေတယ်... အခုလို သတိပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ... Thanks Friend.
Permalink Reply by fawyas uddin on July 6, 2015 at 1:38
အ​တော်​​လေး ​ကောင်းတဲ့အကြ့ဥာဏ်​​လေးပါ ။​ကျေးဇူးအများကြီးတင်​ပါတယ်​။
Permalink Reply by khaingmaysan on July 6, 2015 at 11:21
Permalink Reply by Richard Michael William on July 7, 2015 at 16:37
Permalink Reply by Moekaung Soemyat on July 23, 2015 at 10:42